ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာသေချာလို့လား - For her Myanmar
အခုခေတ် မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများပြောကြတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ ငါက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ငါ ပျော်တာ ငါလုပ်တာ လူတွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန် ဝေဖန် လုံးဝ I don’t Care ပဲ တဲ့။
ဒီလို စကားမျိုး အက်ဒ်မင်လည်း ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်လေ။ နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်လောက်တုန်းကပေါ့။ အခုတော့ အဲဒီလို သိပ်မပြောတော့ပါဘူး။ မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ အက်ဒ်မင်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တာ မှားတယ်။ လူဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မကင်းကွာရဘူး။ ဘလာ ဘာလာ ဘလာ ဆိုပြီး သြဝါဒတွေ ခြွေတော့မယ် မထင်ပါနဲ့နော်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။
Related Article >>> ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ?
အက်ဒ်မင် မေးချင်တာက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တာသေချာလို့လား။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး လို့ တွင်တွင်အော်နေရုံနဲ့ တကယ်ပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ရာရောက်သွားပြီလားဆိုတာပါ။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ အက်ဒ်မင့်အတွေ့အကြုံကို ပြန်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ အက်ဒ်မင်ငယ်စဉ်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ တွင်တွင်အော်နေခဲ့ပေမဲ့ ကိုယ့်မသိစိတ်ထဲမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်တဲ့ စိတ်က မသိမသာခိုအောင်းနေခဲ့တာပါ။ ဒါကို နောက်ပိုင်း ကိုယ့်အကြောင်းကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှ ဒီလို နားလည်လာတာပါ။
လူ့သဘာဝအရ ချီးမွမ်းစကားသံကို တပ်မက်တယ်။ ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့သံကို မကြားလိုဘူး ဒါဟာ သဘာဝပါပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုသူတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်က ချီးမွမ်းစကားဆိုတဲ့အခါ သူတို့လည်း သာယာပျော်ရွှင်ကြမှာပဲလေ။ ဒါဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာ ဘယ်မှန်တော့မလဲနော်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ပျော်သလို ကိုယ်နေတတ်တာကို ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့လာတဲ့အခါ မသိစိတ်မှာ ထိခိုက်ရတယ်။ ငါက ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်အောင်မလုပ်ရဘဲ လူတွေက ငါ့ကို မကောင်းပြောကြတယ်ဆိုတဲ့ ဒေါသနဲ့ မာနလေးက ခေါင်းထောင်လာတယ်။
ငယ်ရွယ်ပြီး အဆင်အခြင်နည်းမှုက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ သူတို့ရှေ့မှာ သူတို့ဝေဖန်တဲ့အရာတွေကို ပိုလုပ်စေဖို့ တွန်းအားပေးစေတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ တွင်တွင်အော်ရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုအစိုက်ကြီးစိုက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုအရွဲ့တိုက်ရင်း သူတို့မကြိုက်တာကို ပိုလုပ်ပြမိတာပါပဲ။
Related Article >>> လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိရဲ့ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းကို ဘယ်လို ထိုးဖောက်မလဲ။
အကျိုးဆက်ကတော့ သူတို့ဝေဖန်လေ၊ ကိုယ်က ပိုဆိုးပြလေ၊ ကိုယ်က ပိုဆိုးလေ သူတို့က ပိုဝေဖန်လေ နဲ့ သံသရာလည်တော့တာပေါ့။ အခုအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ ဒီလိုဖြစ်ရတာကို နားလည်လာတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငါ မသိစိတ်ကနေ ဂရုစိုက်မိနေခဲ့ပါလား ဆိုတာ သိလာပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ အက်ဒမင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဝေဖန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ရပ်တန့်ခဲ့တာလားဆိုတော့ နိုးပါ။ အက်ဒ်မင့် ခံယူချက်က ကိုယ့်လုပ်ရပ်တစ်ခုဟာ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားတာမျိုး၊ သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတာမျိုးကလွဲရင် လူတိုင်းဟာ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာလုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်စေဘဲ အက်ဒ်မင်ပျော်ရာလုပ်တာကို ဘယ်သူဝေဖန်လို့မှ ရပ်တန့်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလိုလုပ်လို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဝေဖန်လည်း အက်ဒ်မင် ဂရုမစိုက်တော့ပါဘူး။ အရွဲ့တိုက်ပြမှာလည်း မဟုတ်သလို စိတ်ထဲ အတွေးမှာတောင် သူတို့ရဲ့ ဝေဖန်စကားတွေကို မထည့်တော့ပါဘူး။ လူတွေဆိုတာက ကိုယ်ကောင်းတာ တော်တာ လုပ်လို့ ချီးမွမ်းခဲပါတယ်။ မရှိရှိရာအပြစ်ကို ဝေဖန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတူတူတော့ ဘာကြောင့် သူတို့ဝေဖန်တာကို ကြောက်နေမလဲနော်။
သူတို့ရဲ့ ဝေဖန်စကားတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ စိတ်ထဲမထည့်တော့တဲ့အခါ ပျော်ရသူက ကိုယ်တိုင်ပါ။ အရင်ကလို ငါ့ကို ပြောရက်လေခြင်း ဆိုတဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ နောက်ပြီး ကိုယ့် ဘဝရည်မှန်းချက်၊ ကိုယ့် မိသားစု၊ ကိုယ့် ချစ်သူ ၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ဒါတွေအကြောင်းပဲ ခေါင်းထဲ ထည့်ထားတဲ့အခါ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ အကြောင်းကို တွေးဖို့စဉ်းစားဖို့ အချိန်လုံးဝမရှိတော့တာပါ။ ပြောရရင် ငါက ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး လို့တောင် မအော်ဖြစ်တော့သည်အထိပါပဲ။
ယောင်းတို့ကိုလည်း အက်ဒ်မင် မသိနားမလည်ခင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အမှားမျိုးမကျူးလွန်စေချင်လို့ ဒီလို အက်ဒ်မင့်အတွေ့အကြုံကို မျှဝေပေးတာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို တကယ်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင် သူတို့အကြောင်းကို ခေါင်းထဲလုံးဝမထည့်ဘဲ ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းပဲ ကိုယ်တွေးပြီး ပျော်ရွှင်မှုရှာဖွေကြဖို့ အက်ဒ်မင်က အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်။
ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘူးလို့ အျောနတောကိုက ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုစိုကျမိနတောပါ
အခုခတျေ မိနျးကလေးတှေ တျောတျောမြားမြားပွောကွတဲ့ စကားရှိပါတယျ။ ငါက ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘူး။ ငါ ပြျောတာ ငါလုပျတာ လူတှေ ဘယျလိုပဲ ဝဖေနျ ဝဖေနျ လုံးဝ I don’t Care ပဲ တဲ့။
ဒီလို စကားမြိုး အကျဒျမငျလညျး ပွောခဲ့ဖူးပါတယျလေ။ နှဈဆယျဝနျးကငျြလောကျတုနျးကပေါ့။ အခုတော့ အဲဒီလို သိပျမပွောတော့ပါဘူး။ မပွောတော့ဘူးဆိုတော့ အကျဒျမငျက ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျတာ မှားတယျ။ လူဆိုတာ ပတျဝနျးကငျြနဲ့ မကငျးကှာရဘူး။ ဘလာ ဘာလာ ဘလာ ဆိုပွီး သွဝါဒတှေ ခွှတေော့မယျ မထငျပါနဲ့နျော။ အဲဒီလိုမဟုတျပါဘူး။
Related Article >>> ဝဖေနျအကွံပွုခကျြတှကေို ဘယျလိုရငျဆိုငျရမလဲ?
အကျဒျမငျ မေးခငျြတာက ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျတာသခြောလို့လား။ ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘူး လို့ တှငျတှငျအျောနရေုံနဲ့ တကယျပဲ ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျရာရောကျသှားပွီလားဆိုတာပါ။
ဒါနဲ့ ပတျသကျလို့ အကျဒျမငျ့အတှအေ့ကွုံကို ပွနျမြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ အကျဒျမငျငယျစဉျက ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘူးလို့ တှငျတှငျအျောနခေဲ့ပမေဲ့ ကိုယျ့မသိစိတျထဲမှာ ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုစိုကျတဲ့ စိတျက မသိမသာခိုအောငျးနခေဲ့တာပါ။ ဒါကို နောကျပိုငျး ကိုယျ့အကွောငျးကို ပွနျသုံးသပျကွညျ့တဲ့အခါမှ ဒီလို နားလညျလာတာပါ။
လူ့သဘာဝအရ ခြီးမှမျးစကားသံကို တပျမကျတယျ။ ဝဖေနျကဲ့ရဲ့သံကို မကွားလိုဘူး ဒါဟာ သဘာဝပါပဲ။ ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘူးဆိုသူတှကေို ပတျဝနျးကငျြက ခြီးမှမျးစကားဆိုတဲ့အခါ သူတို့လညျး သာယာပြျောရှငျကွမှာပဲလေ။ ဒါဆိုရငျ ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘူးဆိုတာ ဘယျမှနျတော့မလဲနျော။
ဒါပမေဲ့ ကိုယျပြျောသလို ကိုယျနတေတျတာကို ပတျဝနျးကငျြက လူတှကေ ဝဖေနျကဲ့ရဲ့လာတဲ့အခါ မသိစိတျမှာ ထိခိုကျရတယျ။ ငါက ဘယျသူ့ကိုမှ ထိခိုကျအောငျမလုပျရဘဲ လူတှကေ ငါ့ကို မကောငျးပွောကွတယျဆိုတဲ့ ဒေါသနဲ့ မာနလေးက ခေါငျးထောငျလာတယျ။
ငယျရှယျပွီး အဆငျအခွငျနညျးမှုက ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘဲ သူတို့ရှမှေ့ာ သူတို့ဝဖေနျတဲ့အရာတှကေို ပိုလုပျစဖေို့ တှနျးအားပေးစတေယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘူးလို့ တှငျတှငျအျောရငျး ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုအစိုကျကွီးစိုကျ၊ ပတျဝနျးကငျြက လူတှကေိုအရှဲ့တိုကျရငျး သူတို့မကွိုကျတာကို ပိုလုပျပွမိတာပါပဲ။
Related Article >>> လူငယျတဈယောကျအနနေဲ့ မိမိရဲ့ အောငျမွငျမှု လမျးကွောငျးကို ဘယျလို ထိုးဖောကျမလဲ။
အကြိုးဆကျကတော့ သူတို့ဝဖေနျလေ၊ ကိုယျက ပိုဆိုးပွလေ၊ ကိုယျက ပိုဆိုးလေ သူတို့က ပိုဝဖေနျလေ နဲ့ သံသရာလညျတော့တာပေါ့။ အခုအသကျအရှယျရလာတဲ့အခါ ဒီလိုဖွဈရတာကို နားလညျလာတော့ ပတျဝနျးကငျြကို ငါ မသိစိတျကနေ ဂရုစိုကျမိနခေဲ့ပါလား ဆိုတာ သိလာပါတယျ။
ဒီနောကျပိုငျးမှာတော့ အကျဒမငျပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျခဲ့ပါတယျ။ ပတျဝနျးကငျြက ဝဖေနျတဲ့ လုပျရပျတှကေို ရပျတနျ့ခဲ့တာလားဆိုတော့ နိုးပါ။ အကျဒျမငျ့ ခံယူခကျြက ကိုယျ့လုပျရပျတဈခုဟာ အကငျြ့စာရိတ်တပကျြပွားတာမြိုး၊ သူတပါးကို ထိခိုကျပကျြစီးစတောမြိုးကလှဲရငျ လူတိုငျးဟာ ကိုယျလုပျခငျြရာလုပျခှငျ့ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျသူ့ကိုမှ မထိခိုကျစဘေဲ အကျဒျမငျပြျောရာလုပျတာကို ဘယျသူဝဖေနျလို့မှ ရပျတနျ့မှာမဟုတျပါဘူး။
ဒီလိုလုပျလို့ ပတျဝနျးကငျြက ဝဖေနျလညျး အကျဒျမငျ ဂရုမစိုကျတော့ပါဘူး။ အရှဲ့တိုကျပွမှာလညျး မဟုတျသလို စိတျထဲ အတှေးမှာတောငျ သူတို့ရဲ့ ဝဖေနျစကားတှကေို မထညျ့တော့ပါဘူး။ လူတှဆေိုတာက ကိုယျကောငျးတာ တျောတာ လုပျလို့ ခြီးမှမျးခဲပါတယျ။ မရှိရှိရာအပွဈကို ဝဖေနျကွမှာဖွဈတဲ့အတူတူတော့ ဘာကွောငျ့ သူတို့ဝဖေနျတာကို ကွောကျနမေလဲနျော။
သူတို့ရဲ့ ဝဖေနျစကားတှကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့မှ စိတျထဲမထညျ့တော့တဲ့အခါ ပြျောရသူက ကိုယျတိုငျပါ။ အရငျကလို ငါ့ကို ပွောရကျလခွေငျး ဆိုတဲ့စိတျလညျးမရှိတော့ပါဘူး။ နောကျပွီး ကိုယျ့ ဘဝရညျမှနျးခကျြ၊ ကိုယျ့ မိသားစု၊ ကိုယျ့ ခဈြသူ ၊ ကိုယျ့မိတျဆှေ ဒါတှအေကွောငျးပဲ ခေါငျးထဲ ထညျ့ထားတဲ့အခါ ပတျဝနျးကငျြက လူတှေ အကွောငျးကို တှေးဖို့စဉျးစားဖို့ အခြိနျလုံးဝမရှိတော့တာပါ။ ပွောရရငျ ငါက ပတျဝနျးကငျြကို ဂရုမစိုကျဘူး လို့တောငျ မအျောဖွဈတော့သညျအထိပါပဲ။
ယောငျးတို့ကိုလညျး အကျဒျမငျ မသိနားမလညျခငျက ဖွဈခဲ့တဲ့ အမှားမြိုးမကြူးလှနျစခေငျြလို့ ဒီလို အကျဒျမငျ့အတှအေ့ကွုံကို မြှဝပေေးတာပါ။ ပတျဝနျးကငျြကို တကယျဂရုမစိုကျဘူးဆိုရငျ သူတို့အကွောငျးကို ခေါငျးထဲလုံးဝမထညျ့ဘဲ ကိုယျ့ဘဝအကွောငျးပဲ ကိုယျတှေးပွီး ပြျောရှငျမှုရှာဖှကွေဖို့ အကျဒျမငျက အကွံပွုလိုကျပါတယျနျော။
Tags: Letters from Heart, life, society, young